U fiirsashada 3M shaqaalaha iyo hawlgabka: Ka dhig tabarucaada inay sii socoto March 3-14 - Cuntooyinka Shaagagga
Feejignaanta 3M shaqaale iyo hawlgab: Ka dhig deeqdaadu inay sii socoto Maarso 3-14
Marka ay timaado taageerayaasha Cuntada Lugaha, way adagtahay in lawaafajiyo u go'naanta 3M. In kabadan 200 mutadawiciin ah oo ka socda 3M ayaa si joogto ah u bixiya cunnooyin shaqaalahooduna waxay leeyihiin taariikh dheer oo taageero maaliyadeed ah oo loogu talagalay Cuntada Lugaha.
3M waxay mar labaad bixineysaa taageeradeeda ku saabsan Cuntada Lugaha Iyadoo loo marayo barnaamijka Isku-darka Lacagta Kaashka Gaajada ee 3M Foundation. Tani waxay ka dhigan tahay in shaqaalaha 3M iyo kuwa howlgabka ah ay ku deeqi karaan Meals on Wheels Maarso 3-14, iyo 3M Foundation waxay u dhigmi doontaa $ dollar-ka-dollar.
Cunnooyinka Lugaha ayaa jeclaan lahaa inaan u fidinno mahadnaqeena mahadnaqa ah 3M Foundation iyo shaqaalihii 3M ee hore iyo kuwa haddaba taageeradooda. Kuwa xiiseynaya kaqeybgalka 3M Gaajada Gaajada Gaajada waxay raaci karaan tilmaamahan:
Helitaanka diiwaangelinta deeqda waxay ku egtahay shaqaalaha 3M iyo hawlgab.
Deeq-bixiyeyaasha ku xiran 3M ayaa ka soo gala goobta www.3M.com/matchinggifts.
Deeq bixiyuhu wuxuu dejiyaa Xisaab Hadiyad u dhiganta 3M oo shaqsi ah haddii aan hore loo samayn. Cinwaan emayl ayaa loo galay si aad u hesho farriin elektaroonig ah oo xaqiijineysa lambarkooda sirta ah. Haddii aadan haysan xisaab email, waad isticmaali kartaa [email protected]. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad kaqeybqaadato barnaamijka khadka tooska ah.
Markaad gasho, xulo barnaamijka "Ciyaarta Gargaarka Gaajada".
Ka dooro Cunnada Wheels-ka hay'adaha loogu talagalay. Marka macluumaadka loo baahan yahay la buuxiyo, daabac laba nuqul oo ah Kuuboon Aqoonsiga Hadiyadda. Hal coupon ayaa loo hayaa diiwaankaaga.
Kuuboon labaad ayaa la soo diraa, deeqda, Cuntada Lugaha. Qaybta deeq bixiyaha hada waa la qabtay.
Haddii aad hadiyad si toos ah ugu sameyso Cunnada Wheels-ka iyada oo loo sii marayo Websaydhada Cunnada, wali waxaad u baahan tahay inaad iska diiwaangeliso hadiyadda nidaamka 3M oo aad hesho Kaadh Aqoonsiga Hadiyadda Kuuboonku waa in lagu soo diraa, fakis ama emayl laguugu soo diraa iyadoo la rasiid ah hadiyadda internetka.
Si aad xaq ugu yeelatid ciyaarta, deeqaha waa in laga diiwaan geliyaa khadka u dhexeeya Maarso 3 iyo Maarso 14, 2014.
3M Foundation waxay bixineysaa ilaa $70,000 oo ah lacag u dhiganta dhammaan ururada kaqeybgalaya. Sameynta tabarucaad horraantiis xilliga ku habboonaanta waxay kaa caawin doontaa inaad hubiso in deeqdaadu ay isku aaddo ka hor inta aan la gaarin $70,000.
Websaydhka ku-deeqidda 3M lama heli doono illaa 3-da Maarso.